कुखुरा किसान आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ८ कार्तिक २०७४, बुधबार १२:२३
विराटनगरका कुखुरा किसानहरु केही समयदेखि आन्दोलित बनेका छन् । समयमा भुक्तानी नपाउने र उत्पादित कुखुराको उचित मूल्यपनि नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । विराटनगरमा झण्डै ५ सय कुखुरा किसानले व्यवसाय गरिरहेका छन् । विचौलियाको प्रत्यक्ष मारमा परेका कुखुरा किसानले समस्या समाधानका लागि संवन्धित सरकारी निकाय समक्ष पुन ः ज्ञापनपत्र बुझाउने र माग संवोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका कुखुरा किसान व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र किसान मोर्चा नगर समिति विराटनगर मार्फत आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा मोर्चाका नगर अध्यक्ष बलराम थापासँग न्यू सृष्टि दैनिकले गरेको कुराकानी ः
हामीले उत्पादित कुखुराको लागत अनुसार मूल्य पाईएका छैनौं । हाम्रो लागत बढी छ । उत्पादित कुखुराको मूल्य डिलरवालाले कम दिन्छन् । उनीहरुका कारण हाम्रो व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । दानाको मूल्य घटेको छैन । २५ रुपैयाँ पर्ने चल्लालाई अहिले ९० पर्छ । डिलरहरु खल्ती भर्ने काम गरेका छन् । उनीहरुलाई कुखुरा किसानको केही मतलव छैन । किसानको हित उनीहरुले हेर्दैनन् । कुखराको मूल्य ५ वर्षदेखि एउटै छ । हामीले १ सय ६० देखि १ सय ९० भन्दा वढी मूल्य पाएका छैनौं । दाना र चल्ला उपलब्ध गराएर डिलरहरुले कमिसन खाने काम गरेका छन् । हामीले बजारको माग अनुसारको उत्पादन गरेका छौं ।
buy Female Viagra, acquire zithromax. कृतिम अभाव पनि हुने गरेको छनी ?
हाम्रो कारणले हैन डिलरवालाहरुको कारणले बजारमा कृतिम अभाव हुने गरेको हो । तपाईहरुले सुनेको सही हो । डिलरवाला, ह्याचरी र दाना व्यवसायीको आन्तरिक एकताले किसानलाई आत्महत्या गर्ने सम्म बनाउँछन् । हामीले कुखुरा बजारमा लैजान चाहन्छौं । फोन गरेर कुखुरा लिन आउनु भनेर डिलरवालालाई भन्यो भने कहिलेकाँही उनीहरु बजारमा माग वढी छ भनेर कुखुरा लिन चाहदैन । अनी हामीले अनावस्यक दाना खुवाएर राख्नु पर्ने हुन्छ । विक्री गर्ने समयमा जति दाना खुवाएपनि उत्पादन दिँदैन । खुल्ला सिमानाको फाईदा र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा भारतवाट आयात गर्ने र स्वदेशी किसान मार्ने काम उनीहरुले गर्छन ।
मूल्य निर्धारण कस्ले गर्छ ?
कुखुराको मूल्य निर्धारण सरकारले गर्नु पर्ने हो । तर गर्न सकेको छैन । जसका कारण विचौलिया फरफ्युम लगाएर हिड्ने अवस्था छ भने किसान सुली गन्हाएको कपडा लगाएर हिड्न विवस छन् । डिलरवाला, ह्याचरी र दाना व्यवसायीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ । सरकार निरिह हुँदा हामीलाई समस्या छ । त्यसले गर्दा हामीले समयमा भुक्तानी नपाउने समस्या छ । एक हप्तामा भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम ६ महिना सम्म पाउँदैन । त्यसले गर्दा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्दैनौं । हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनौं ।
तपाईहरुको मुख्य माग के छ ?
कुखुरा पालन व्यवसायमा चल्ला र दानाको गुणस्तरले ५० प्रतिशत काम गर्ने डाक्टरी प्रमाण भएकाले व्यवसायीक कुखुरा पालनमा हुने हानी नोक्सानीको जिम्मा ह्याचरी र दाना उत्पादनकहरुले लिनुपर्ने । चल्लाको वीमा योजना ह्याचरीले शुरु गर्नु पर्ने वा एक साता भित्रमा मरेका सवै चल्ला रिप्लेस गर्नुपर्ने । सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था अविलम्व कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने मुख्य माग रहेका छन् । हाम्रा मागका बारेमा सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छैन । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै काम गरेको छैन ।
सरकारले के गर्न आवस्यक छ ?
सरकारी स्तरवाट वजारीकरण नहुँदा कुखुरा किसान मारमा परेका छौं । कृषि मन्त्रालयले किसानले उत्पादन गरेका कुनैपनि बस्तुको मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भनिएतापनि त्यो नीतिमै सिमित भयो । सरकारको नीति हेर्दा राम्रो छ । तर व्यवहारमा आउन नसक्दा समस्या भएको हो । सरकारले नीति कार्यन्वयन गरोस् हाम्रो भनाई यत्ति मात्र हो ।
अव तपाईहरुको कार्यक्रम के छ ?
हामीले पटक पटक संवन्धित निकायमा आफ्ना कुरा राख्दै आएका छौं । अहिले सम्म खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन । दसै लगत्तै हामी आन्दोलनमा जाँदैछौ । नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र किसान मोर्चा मार्फत जिल्ला पशु कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पुन ः ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । त्यसवाट पनि अपेक्षित काम भएन भने हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा लाग्ने छौं ।sildenafil
विराटनगर, ३ साउन । विराटनगरका २२ हजार बढी विपन्न महिला तथा बालबालिकालाई पौष्टिक आहार खुवाउने...